अहिलेको संरचनाले चाहेजस्तो महानगर बन्न सक्दैन्: रुद्रसिंह तामाङ Darpansansar News
काठमाडौं – हाम्रो राजधानीलाई ब्यबस्थित र बिकसित बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको काठमाडौं महानगरपालिकाले अहिले के गर्दैछ सबैको चासोको बिषय छ ।
बिनासकारी भूकम्पपछि उद्घाटन गरिएका बिभिन्न ऐतिहासिक ठाउँहरुको पुर्ननिर्माण कहा पुग्यो, राजधानीको पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको भ्यू टावर किन बन्न सकेन् । यी र यस्तै बिबिध बिषयमा केन्द्रित रहेर गोविन्द मरासिनीले काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङसँग गरेको कराकानी:
अहिले महानगरले के गर्दैछ ।
मुख्यत अहिले महानगरले भूकम्पपछि महानगरले बनाउन लागेका बिभिन्न ठाउँको पुर्ननिर्माण, काठमाडौंको फोहोर ब्यबस्थापन र अब्यबस्तिथ शहरीकरणमा काम गरिरहेको छ ।
तपाई महानगरमा आउँदा जुन उत्साह जनतामा थियो त्यो भएन भनिन्छ नी हो ? महानगरमा आएर गरेका सम्झन लायकका काम केहि ?
कुन चाहि कामलाई प्रमुख मान्ने कुरा हो परिवेश अनुसार फरक हुन्छन । स्मार्ट सिटीको योजना र स्मार्ट टेक्नोलोजी अगाडी बढाउने कुराहरु र काठमाडौंलाई डिजिटल बनाउने भनेर सिस्टम नै कागजबिहीन बनाउन खोजेका छौं त्यो प्रक्रिया केहि अगाडी बढेको छ । हाम्रा महानगरका जानकारीहरु मोवाइल एप्समा हेर्न सकिने ब्यवस्था भैसकेको छ पूर्वाधारका कामहरु पनि अगाडी बढिरहेका छन् । केहि नविन प्रविधि भित्राउनेदेखि लिएर फोहोरबाट बिजुली बाल्ने, काठमाडौंका सडक उज्यालो बनाउन बत्ती जडान गर्ने लगायतका मुख्य कामहरु भएका छन् । मन्दिरहरुको पुनःर्निर्माण सडक ब्यबस्थापन, अण्डरग्राउण्ड पार्किङहरु पनि अगाडी बढिरहेका छन् । सबै ठाउँमा केहि न केहि परिवर्तन गर्ने योजनाका किसिमले अगाडी बढिरहेका छौं ।
बन्दै गरेको रानीपोखरी त नियमविपरित बनाएर योजनाबाट हातै निकाल्नुभयो भनिन्छ नी ?
होईन, त्यो पोखरीको बीचको मन्दिरको बिषयमा कुरो आएको हो । बाहिरी काम चाँहि हामीले नै गरिरहेका छौं मुल मन्दिर चाहि तपाईहरुले कसरी बनाउने हो त्यसरी नै बनाउनुस भनेर हामीले पुरातत्व बिभागलाई जिम्मा दिएका छौं ।
खानेपानी, ढल, रिङरोड, अब्यबस्थित बस्ती झन बढ्दो छ । यसमा महानगरले के गर्दैछ त ?
तपाईले भनेका यी सबै कुराहरु त हाम्रो जिम्मामा पर्दैनन् । खानेपानी चाँहि हामी बोर्डमा भएकाले हाम्रो पनि दायित्व रहन्छ । सडक बिस्तारमा हाम्रो रोल हुन्छ यो त समय लाग्छ लगभग डेढसय भन्दा बढी सडक बिस्तार गर्नका लागि टुंगो लगाउने काम भैरहेकै छ ।
महानगरले बनाउने भनेको भ्यू टावरको काम किन अड्कियो ?
काम गर्छु भनेर कम्पनीले जिम्मा लिएको छ उसको केहि समय बाँकी छ अब सायद काम शुरु गर्ला यदि भएन भने पनि हामी किन भएन भने चासो देखाउने छौं ।
हामीले बनाउन खोजेको महानगर कस्तो हो ?
हामी अहिले जुन संरचनामा छौं त्यो संरचनामा उभिएर मात्र कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको संरचनाले साँच्चिकै हामीले चाहेजस्तो महानगर बन्न र बिकास हुन सम्भव छैन । त्यो संरचना पनि परिवर्तन हुने क्रममा छ संबिधान कार्यान्वयनको क्रममा छ संबिधान कार्यान्वयन भैसकेपछि स्थानीय तहको अधिकार संबिधानमा प्रष्ट किटेर आइसकेको छ त्यो लागु भैसकेपछि नयाँ ढंगले जान सक्छ । अहिलेकै संरचनामा अलि गाह्रो भने भएकै भने पक्कै हो ।